Yepamberi uye Inovandudza Off-gird uye On-grid Energy Storage Solution
Brand:DET kana OEM
Kambani yedu 1Mwh / 2Mwh bhatiri system ine zvinotevera paramita:
1) Zvinoenderana nehurongwa hwekuremerwa kwemidziyo isingasviki 1MW / 2mwh zvishandiso mune yakagara yakagadzirwa simba rekuchengetedza kabhini, iyi simba rekuchengetedza sisitimu purojekiti inoshandisa 1MW maPC mukabhini yakagadziridzwa kubata simba rekuchengetedza bhatiri stack.
2) Imwe neimwe stack ine 1 PCS uye 13pcs bhatiri masumbu akafanana, uye akashongedzerwa nebhatiri manejimendi system.Imwe neimwe bhatiri cluster ine bhatiri cluster management unit uye 15pcs bhatiri tambo manejimendi units (16 tambo BMU).
3) Seti yemidziyo system ine 1 seti ye1MW maPC;bhatiri rinokwana 2.047mwh, kusanganisira 3120pcs mabhatiri muhuwandu uye 240pcs mabhatiri musumbu rega rega.
4) Rimwe bhokisi rebheteri rinoumbwa ne 16 single 205ah masero mumutsara, uye rimwe boka rinoumbwa nemabhokisi gumi nemashanu ebheteri mumutsara, iyo inonzi 240s1p bhatiri cluster, iyo 768v205ah;
5) Imwe seti yemidziyo inoumbwa nemapoka gumi nematatu emabhatiri e240s1p akafanana, anoti 2.047mwh.
Plant standby power supply Fambisa simba rekugadzira
Zvakapfuura: 48V LifePO4 Home Energy Storage Series
Zvinotevera: 51.2v yakakwira bhatiri uye inverter yakabatanidzwa kabati bhatiri mhinduro
Rated voltage (V) 768
Yakayerwa kugona (AH) 205*13
Simba rose (KWh) 157.44*13
Huremu hwese (KG) 19682+8000 (kufungidzira)
Kuwanda kwesimba (KWh/KG) 73.9
Battery group mode 240S 1P@13 Boka
Battery pack discharge voltage range (V) 600-864
Rated discharge current (A) 100*13
Yakatemerwa kuchaja ikozvino (A) 100*13
Kushanda tembiricha renji (℃) Charge 0~55℃,Discharge-20 ~ 55 ℃,
Inokurudzirwa SOC chiyero chebasa 35-85%
Nguva yakareba shelving simba rinodiwa 40%~70%